Azia Atsinanana · Jolay, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Azia Atsinanana · Jolay, 2017
Tantara mikasika ny Azia Atsinanana tamin'ny Jolay, 2017
Shina30 Jolay 2017
Zavon-tsetroka Tao Azia Atsimo Atsinanana, Atao An-kira Anaty Lahatsary
Indonezia30 Jolay 2017
Ilay Maleziana bilaogera, Kean-Jim Lim, no nampiditra ity lahatsarin-kira (MV) ity, nataonà Maleziana vitsivitsy manohitra ny zavon-tsetroka ateraky ny fanapahana sy fandoroana faritra hanaovana fambolena any amin'ny nosy indoneziana Sumatra eo akaikiny eo.
Malezia29 Jolay 2017
Filipina29 Jolay 2017
Vietnam29 Jolay 2017
Thailandy28 Jolay 2017
Shina26 Jolay 2017
Fitantarana Manokana: Horohorontany Tao Sichuan (Shina)
Tamin'ny 12 May 2008, namely ny faritanin'i Sichuan, ao atsimo-andrefan'i Shina ny horohorontany nahatratra 7.8 amin'ny maridrefy Richter. Tao amin'ny distrikan'i Wenchuan no nisy ny foibeny, saingy heno hatrao Beijing sy Hong Kong ny hovitrovitra. An'aliny ireo niharam-boina. Nametraka fijoroana vavolombelona, lahatsary, sary sy fanehoan-kevitra tamin'ny aterineto ireo olon-tsotra.
Filipina25 Jolay 2017
Koreana Tavaratra Sady Mpanao Sariitatra Maneho An-tsary Ny Fiainan'ireo Olona Nandositra
Korea Atsimo24 Jolay 2017
Fony mbola kely i Choi Seong-guk dia nidera azy ny mpampianatra noho ny sariny mampiseho ny miaramila Amerikana izay nolazainy fa nataony araka izay azony atao mba ho toy ny " faran'izay ratsy tarehy sy mahery setra indrindra."